Fivoahana amin’ny hamehana covid : fandaminana Okt/Nov 2020 – FJKM Ambavahadimitafo Fivoahana amin’ny hamehana covid : fandaminana Okt/Nov 2020 |
Fivoahana amin’ny hamehana covid : fandaminana Okt/Nov 2020
Publié le 22 octobre 2020 à 06:10
Toy izao manaraka izao indray ny vaovao tsara ho fantatra mikasika ny fiainan’ny fiangonantsika :
1. Miditra amin’ny 9 ora maraina ny fiangonantsika ny alahady faha – 25 oktobra 2020 ho avy izao. Ny katekomena kosa dia miditra amin’ny 7 ora sy sasany maraina.
2. Mbola mitoetra avokoa ireo fepetra ara – pahasalamana mba hisorohana ny tsy hiparitahan’ny valan’aretina.
3. Miverina amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ny fiangonana manomboka ny alahady faha – 1 novambra 2020 ho avy izao. Mbola ho entina miandalana amintsika eto ihany ny fepetra izay tsy maintsy harahina mandritra izany fandraisana ny fanasan’ny Tompo izany.
Dia mankasitraka antsika rehetra ny amin’ny fanarahana ny fandaminana.
NY BIRAON’NY FITANDREMANA.